Hevitra MPANOHARIANA | Politika | 48
Ny Kandida teto Iarivo niatrika fanontaniana
2007-09-21 @ 16:05 in Politika
Nisy vondrona fiaraha-monim-pirenena nandefa fanontaniana maromaro tany amin’ireo nirotsaka hofidiana teto Antananarivo. Tamin’ny 10 septambra ireo fanontaniana mitovy ho an’ny rehetra ireo no nomena ny kandidà ary naseho gazety ihany koa ny ampitson’io. Nomena hatramin’ny 14 septambra ny kandidà hamaliana ireo fanontaniana 12 miompana amina loha-hevitra 12 mazava loatra.
Ireto avy aloha ireo vondrona fiaraha-monim-pirenena ireo: Friedrich Ebert Stiftung, FTM/CPM, Fifafi Analamanga (finoana, fanantenana, fitiavana), Rjdp, Sos aux victimes du non droit, Kmf Cnoe, Réseau genre, Fisemare, Yltp, Sembana mijoro, Fisema, Confédération Syndicale des Travailleurs Malagasy, Fivmpama, Novastella ary ny Association des femmes Elues Maires de Madagascar.
Navoaka tamin’ny 19 sy 20 septembre ny valitenin’ireo kandidà namaly ireo fanontaniana 12 ireo. Izany hoe fotoana kely tsy ampy tena andinihana izay mety hahaliana ny olona sy hanontaniana ny anton’ny valinteny na tsy namaliana sisa vao mety ho mahavaky hatramin’ny farany ireo pejy efatra aminn’y soratra koritika dia koritika hany ka raha tsy tsara maso dia ho sahirana sy ho bambaray fotsiny ny soratra hita.
Ny zavatra azo ambara dia izao: somary tratra aoriana ihany ny nanomezana ireo fanontaniana ny kandidà na dia ho an’Antananarivo fotsiny ihany aza. Raha ny fahalalako azy dia tany amin’ny faraparan’ny voalana aogositra tany ho any no tsara nanomezana azy ary naverina ny andro nanombohan’ny fampielezan-kevitra. Amin’izay fotoana izay dia ho hafa kokoa ny fandehan’ny adi-hevitra nandritra ity fifidianana ity. Mba nahadinika zavatra vitsivitsy ahay manko ny mpifidy ary ho nahatsapa fa tompon’ny fanapahan-kevitra tokoa fa tsy ho nentin’ny fo hoe tiako ranona na tsy tiako ranona fotsiny. Amin’izay fotoana izay ihany koa dia ho fantatry ny maro izay manana fahalalana na praograman’asa fiomanana rehefa tafiditra tokoa any amin’ny antenimiera any.
Faharoa manaraka izany dia nisy ireo kandidan’antoko tsy namaly ny fanontaniana napetraky ny fiaraha-monim-pirenena mihitsy. Ny voalohany lazaiko etoana dia ny avy ao amin’ny mpiara-dia amin’ny filoha aloha: Ny Grad Iloafo, nahagaga ihany satria anisan’ny nandrotsaka betsaka manko izy teto Antananarivo (8) nefa tsy nisy namaly na dia iray aza. Tsy noterena hamaly tokoa angaha nefa dia itsaran’izay tena mpanara-baovao politika izay. Saiky tsy namaly araka izany ihany koa ny avy amin’ny fanoherana rehetra nandrotsaka kandida teto Antananarivo dia ny Arema, ny tsy miankina Ny Analamanga ary tsy nahitana teny tahaka izany ihany koa ny ao amin’ny Fidem an’Atoa Maurice Beranto.
Fahatelo dia saiky tsy namaly avokoa ny avy ao amin’ny Tim afa-tsy ny ao amin’ny fari-pifidianana fahaefatra misy ny Minisitra Radavidson Andriamparany irery. Izany hoe raha 12 ny nirotsaka dia tsy nisy namaly ny 10 nefa dia misy minisitra hafa indrindra nirotsaka teto Antananarivo. Ny hafa dia mamerimberina fotsiny ny hoe, rehefa mitety faritra indray io, izay akaiky sy mora mifandray amin’ny mpanantanteraka fidiana mba hahaingana ny hetahetanareo vahoaka sy ny hoe izay mahay miara-miasa amin’ny mpanatanteraka fidiana hampandrosoana haingana ny firenena…koa raha tsy hoe fifidianana Ben’ny tanàna izy ity ka izany no itarihana olona. Tena manankevitra tokoa ve ireo hafa tsy namaly sa sendra ny fanontaniana tsy hainy valiana (izy 12) sa tsy firaharahahiana ny mpifidy ihany koa. Mety ho ny tsy fahamatorana politika mihitsy ihany koa no tsy ao (anaty propagandy tokoa aho izany).
Fahaefatra dia misy ny mpiray antoko ny sasany mamaly ary ny hafa tsy mamaly. Mifananhantsahana ny isany ka izay no ampidirako ny Avi, ny Aldr, ny RPSD vaovao ary ny Teza. Mety ny fahitana ny valintenin’ireto vondrona ireto no itarafan’ny olona hoe mitovy hevitra tokoa ve ireto mpiray antoko ireto sa tsia? Ny zavatra maningana hita amin’ny Rpsd vaovao aloha dia saiky vehivavy avokoa ny lohalisitra natolotr’izy ireo any amin’izay nandrotsahany ( raha tsy izy rehetra aza fa tsy fantatro avokoa moa).
Ary ny fahadimy farany dia ny an’ny Ame izay taratasy iray no niarahan’izy rehetra namaly ny fanontanian’ny fiaraha-monim-pirenena. Azo heverina fa nisy fiaraha-midinika amin’izay fomba hamaliana ny teny izany ary mba tsy hahitana loatra izay mety ho fifanoheran-kevitra sanatria tsy voatandrina. Ny hany lesoka ho azy ireo dia tahaka ny kelikely lanja ihany izy ireo raha mitaha amin’ny mpifaninana hafa.
Miala tsiny aho fa nikasa ny hamoaka ny hevitr'izy ireo tokoa saingy toa tsy tontosa izy ity. Ho hita eo ihany anefa...
Akorontana indray ve i Madagasikara ?
2007-09-08 @ 10:15 in Politika
Vaovao nanaitra ny namakiana hatraty ivelany ny fonjan’Antsiranana sy ny nandraisan’ny fitondram-panjakana handefasana rezimantana mpitandro filaminana tany toliary noho ny famonoana tsy amin’ny antony ataon’ny sasany isak’alina ankoatra ny fanafihana mitam-piadiana ao amin’ny tanàna any atsimo andrefana io.
Andro voalohany amin’ny fampielezan-kevitra hifidianana depiote hotontosaina amin’ny 23 septambra moa androany ka manjary mitodika politika avy hatrany ny eritreritra namaky ny toe-draharaha tamin’ny gazety androany. Mampahatsiahy asa fampihorohoroana anaty vanim-potoana fifidianana manko izy io ary matetika dia ny tsy manantsiny no potika amin’ny tsy nataony.
Na fohifohy ihany aza izay soratako ny tiana ampitaina kosa dia hoe tokony hanameloka ny fihetsika ny antoko mpanohitra fa tsy hihazakazaka amin’ny karazam-pitenenana sahala amin’ny hoe : Ireny no manaporofo fa tena mahantra ny vahoaka malagasy ka lasa manaonao foana sy izay mety ho fombam-pitenenana hafa. Mahantra ve dia hanana fitaovam-piadiana mahery vaika ? Iraka ireny amiko.
«Mialoha 1 2 3 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 51 52 53 Manaraka»